Compass: Kutengesa Kugonesa Zvishandiso Kutengesa Pay Per Click Marketing Services | Martech Zone
China, June 16, 2022 China, June 16, 2022 Daniel Alvarado
Munyika yekushambadzira yedhijitari, maturusi ekugonesa ekutengesa akakosha kuti masangano ape vashandi zviwanikwa zvinodiwa kudzika zvigadzirwa zvevatengi zvinobudirira. Hazvishamisi, marudzi aya emasevhisi ari kudiwa zvakanyanya. Kana dzakagadzirwa uye dzichishandiswa nemazvo, dzinogona kupa masangano ekushambadzira edhijitari nemidziyo inodiwa kuendesa zvemhando yepamusoro, zvinoenderana nezviri kune vangangove vatengi.
Maturusi ekugonesa ekutengesa akakosha pakubatsira masangano kubata uye kugadzirisa kutenderera kwekutengesa. Pasina ivo, zviri nyore kurasika muhuwandu hukuru hweruzivo maererano nemusika wazvino uye nzira dzakanakisa dzekusvika uye kusvika kune vatengi. Kuita imwe yeiyi yekuunganidza uye yekugadzira maturusi ndiyo nzira yakanakisa yekusimudzira yako yekushambadzira uye zvikwata zvekutengesa kuedza - kubvisa basa rakasimba uye nzvimbo yekukanganisa inouya nekuunganidza ruzivo urwu zvakazvimirira. Kana iyo agency ikashandisa iyo chaiyo chikuva chekugonesa kutengesa, inobvumira kuwanda kwemabhenefiti akadai se:
Kuchengetedza Nguva: Yese-mu-imwe chishandiso inounganidza uye inopa ruzivo rwakakosha kuzivisa zvinobudirira kushambadzira uye zvikwata zvekutengesa nekushandisa iwo akakosha mazwi uye zvakanyanya kunangwa mapeji ekumhara. Masangano anogona kuita mari yakawanda kana yakawanda muhafu yenguva yainowanzo tora kuunganidza uye kuongorora iyi data nenzira yechinyakare.
Kuwedzera Kuvimba: Kana boka rekutengesa richiziva chaizvo zviwanikwa zvavanazvo pazvigunwe zvavo, zviri nyore kuvhara madhiri nekukurumidza uye zvine mutsindo - ichikurudzira kuvimba nemaitiro ese.
Kuwedzera ROIs: Mapuratifomu ekugonesa ekutengesa anogadzira yakanyanya kutariswa uye inofambiswa yekutengesa ine simba iyo inogona kuwedzera kugona kwechikwata kuvhara kutengesa uye kushandura inotungamira, pakupedzisira zvichikonzera kuwedzera kwemari yese.
Nekudaro, haasi ese ekutengesa ekutengesa zvirongwa akagadzirwa zvakaenzana - yakaunganidzwa yakawandisa yeruzivo haina kukwana kushongedza zvizere nyanzvi dzekutengesa. Chishandiso chinoshanda chekugonesa kutengesa chinopa zvikwata zviwanikwa zvinodiwa kuti zvibudirire uye zvinokurudzira kugadzirwa netimu njere dzinofambisa kuvandudzwa kwekuita.
Ndiko kusaka takagadzira White Shark Media's Compass chikuva, yedu chaiyo mumba kugonesa kwekutengesa tool. Chikuva chedu hachingopi ruzivo rwechizvino-zvino nezvemaitiro akakodzera muindastiri uye maturusi ekubatsira kupa simba zvikwata zvekutengesa asi zvakagadzirirwa zvakajeka kubhadhara-per-click (PPC) kushambadza, uko mamwe mapuratifomu anowanzo kutsamira kune mamwe generic ad kuedza. Compass yakagadzirirwa kuderedza zvikanganiso, kuwedzera purofiti uye kutsigira imwe neimwe nhanho yePPC yekutengesa kutenderera.
Compass By White Shark Media
Kuburikidza neCompass, masangano ane zviuru zvezvishandiso zvavanazvo, zvinosanganisira:
PPC Audit Injini
Audits chinhu chakakosha chemaindasitiri mazhinji anoshandiswa kuongorora uye kuongorora mashandiro. Kunyanya, kana zvasvika kuPPC, ongororo inobvumira vatengesi vedhijitari kuwana ruzivo runogona kubatsira kuvandudza kushanda kweGoogle Ads kana Microsoft Campaigns, iyo inobatsirawo zvikwata zvekutengesa kudzika mishandirapamwe iyi zvakanyanya. Isu takagadzira injini yedu yekuongorora kuti igadzire maodhita akasanganiswa nekurudziro yeakanangana neGoogle neMicrosoft ad campaigns. Mishumo iri nyore kuwana, kurodha uye kugovera muPDF fomati.
Kuburikidza neCompass proposal engine, makambani haachafaniri kuvimba nesimba revanhu chete kugadzira magwaro anoshanda anosanganisira data rinodiwa. Iyo Compass chikuva inogadzira zvichena zvakanyorwa zvikumbiro zvinosanganisira keyword kurudziro, mukwikwidzi data, ad preview, nezvimwe. Aya magwaro achabatsira zvikwata kuunza data rakasanganiswa kutsigira nekudzivirira mazano matsva uye optimizations kune vatengi.
Kana vashandisi vakambomira panguva yechikamu chekutengesa maitiro, vane sarudzo yekusangana kwemaawa maviri ekubvunzana neWhite Shark's yakatsaurirwa Strategic Account Mamaneja. Munguva yekubvunzana uku, nyanzvi dzeCompass dzichafamba nechikwata kuburikidza nekuongorora kwepombi, mazano ekufamba, nzira dzekukura kwenzvimbo, nezvimwe.
Pane nguva dzose nzvimbo yekuvandudza mumashandiro esangano, zvisinei kuti iindasitiri ipi yainoshanda nayo. Sezvo nyika yekushambadzira iri kuramba ichishanduka, zvakakosha kupfuura nakare kose kuti ugare uchiziva nezvemaitiro akanaka. Kuburikidza neWhite Shark's online academy, vashandisi veCompass chikuva vanokwanisa kuwana PPC uye kutengesa kunogona kutorwa nekuwanikwa pese pazvinoda.
Pane ruzivo rwakawanda uye zviwanikwa zviripo zvekuti zvinogona kunetsa kuona kuti ndezvipi zvichabatsira kambani kana brand. Kuburikidza neCollateral Library yedu, vashandisi vanokwanisa kuwana ruzivo rwechizvino-zvino, rwakasimbiswa maererano nemafambiro akatwasuka, mabhuku ekutamba, madhiri, mapeji rimwe chete, mavhidhiyo, nezvimwe. Kuburikidza neCompass, zvese zvinodiwa nesangano kuvandudza kutaurirana kwaro nezveGoogle, Microsoft, Facebook, uye kutsvaga injini optimization (SEO) zvigadzirwa zviri pamunwe wayo.
Sezvo mapuratifomu ekugonesa ekutengesa ari kuwedzera mukurumbira muindastiri, makambani anomhanyisa njodzi yekudyara mumidziyo inogona kusapa zvine musoro zvinokonzeresa. Izvo zvakakosha kuti masangano aite tsvagiridzo yavo uye nekushingairira kusarudza chikuva chinoshanda zvakanyanya kuzvikwata zvavo. Kana izvo zvangoitwa, masangano achange ari munzira yekuunza mhedzisiro iri nani munguva pfupi, zvichibvumira nguva yakawanda inoshandiswa pazvinhu zvakakosha - kuisa mari muvatengi.
Tags: kushambadzakubhadhara pakukandakubhadhara pakushambadzira kushambadzappcppc kushambadziraKugonesa Kugonesawhite shark media
Daniel Alvarado inyanzvi yekushambadzira yedhijitari uye VP yeTekinoroji pa White Shark Media. Iye ane basa rekutungamira timu yevagadziri vepasi rose kuseri kweWhite Shark Media's Compass, Yese-mu-One Sales Enablement chikuva cheAgency ari kutsvaga kuyera yavo Pay-per-Click portfolio. Danieri ane makore anopfuura 8 ane ruzivo achishanda muindasitiri yekushambadzira tekinoroji. Akapa rutsigiro kubva kuhurongwa hwekushambadzira uye kusimudzira kwesoftware pamabasa akasiyana siyana, anosanganisira Digital Advertising Manager, Software Architect, uye VP yeTech. Neruzivo rwakadzama mune tekinoroji, Daniel anobatsira masangano kushandisa tekinoroji kugadzira zviitiko zvine musoro, kurerutsa mabasa akaomarara uye kuunza kukosha kune vatengi vavo.